Zvawakapiwa, NeZvawava Nazvo
"Zvino isu tose tinoti tichitarira nechiso chisina kufukidzirwa kubwinya kwaShe sapachivoni-voni, tinoshandurwa tichifanana nomufananidzo iwoyo, tichibva pakubwinya kumwe tichienda kuno kumwe kubwinya, sezvinobva kuMweya waShe" (2 VaKorinte 3:18).
Pane zvinhu zvawakapiwa. Pozoita zvinhu zvawava nazvo mumavoko. Zviviri izvi zvakasiyana. Ungava nezvinhu zvauri kusangana nazvo. Zvinhu izvi hazvisi izvo zvinoronga hupenyu hwako. Shoko raMwari ndiro rinokutaridza zvawakapiwa. Unofanira kuziva zvinhu izvi. Asi izvi zvoga hazvina kukwana. Unofanira kubva washandisa Shoko iri pakurarama kwako. Ndiko kuti utore zvawakapiwa zviya. Ndiko kuti zvichiva mumavoko ako. Ndiko kuti hupenyu hwako huchishanduka.
Saka unofanira kuziva zvawakapiwa naMwari. Ndicho chinhu chokutanga. Ndiko kuti ugogona kutora zvinhu izvi. Ndiko kuti ugogona kushandura hupenyu hwako. Unenge wava kurarama hupenyu hweHumambo. Unohurarama uri pano panyika.
Ari mauri ndiye mukuru. Akadarika uyo ari munyika. Ndizvo zvatinoziva muHumambo hwedu. Ndizvo zvakanyorwa. Ndizvo zvawakapiwa. Kristu vanogara mukati mako. Unofanira kunzwisisa chinhu ichi. Hapana chinozogona kukuvhundusa. Ungarwiswa hako. Asi unoziva kuti unokunda. Unokunda nguva dzose! Mukuru wacho ndiye anogara mukati mako.
Ungawanikwa uine zvirwere. Zvirwere izvi zvinogona kunge zvakaipisisa. Izvozvo hazvina basa. Wava weropa raMwari. Wava werudzi rwaMwari. Saka wava nehutano hwavaMwari. Ndihwo hwawakapiwa. Unofanira kurarama semunhu anonzwisisa izvi. Ndiko kuti hutano hwako hushanduke. Ndiko kuti hunake.
Kuda pane zvinhu zvausina. Ingava mari. Izvozvo hazvirevi kuti uri murombo. Bvisa meso ako pahomwe isina mari iyi. Funga pamusoro pezvawakapiwa. Uri mwana wedzinza raAbrahama. Ndizvo zvinotaura Shoko raMwari. Nyika yose yava yako. Ndiwe muridzi wefuma yaMwari. Fuma iyi iri muzita rako, naKristu, muri pamwe chete. Hareruya!
Ungasangana hako nematambudziko. Matambudziko aya ndeenhema. Hazvina basa kuti abva kupi. Anogona kupedzwa. Asi iwe unofanira kushandisa Shoko raMwari. Taura semunhu ari muna Kristu. Gara meso ako ari paShoko raMwari. Unozotanga kushanduka. Zvisina kunaka zvose zvinozoshandurwa. Zvinozowirirana nezvawakapiwa. Wava munhu werudzi rweVamwari.
Jehovha vanotonga pasi nedenga. Ndivo hutiziro hwangu. Ndivo simba rangu. Ndivo batsiro yangu. Vanogara vari pedo kundibatsira. Vanosimbisa tsoka dzangu. Vanoita kuti ndigone kukwira makata! Zvinhu zvingauya kundirwisa. Asi ini ndinozvikunda chete. Mukuru wacho ndiye anogara mukati mangu. Akadarika vari munyika. Saka ndinoziva kuti ndava munhu werudzi rupi! Hareruya!
Chitatu, 18 Gunyana 2019 )